Imba - Forex Lens
Ziso rako mumisika.
Tsvaga yako YAKATADZANA EDGE.
ONA FOREX LENS
Tarisa, Dzidza, uye Tingawaneiko Pamwe chete
nenharaunda yedu yekutengesa mukati me
Pro Trader Nhengo
Joinha yedu isina kufananidzwa Forex yekutengesa imba
kwatinoyerera LIVE zuva nezuva
kukupa iwe mhenyu musika kuongororwa
& kutengeserana mazano panguva yeNew York
& uye/kana London zvikamu.
IVA PRO TRADER
MAZUVA EZVO ZVEMAZUVA
Gain DZIVA kupinda vane ruzivo vaongorori vehunyanzvi yeQ & A, mhinduro pa
kutengeserana mazano, uye kukupa iwe purofiti yekutengesa setups
mune Forex, Commodities, Indies & Crypto misika.
Wana Trade Mazano!
Wana mukana kune Dzidzo raibhurari ye400+ maawa emavhidhiyo.
Isu tinodzidzisa yakasimba nzira dzekutengesa kupa vatengesi REAL EDGE mukutengesa kwavo.
Unoda Kudzidza Zvakavanzika ZveSmart Mari?
At Forex Lens, hatikutengesi zviroto nezvipikirwa, tinokutengesa RESULTS. Forex Lens is Institutional Forex yekutengesa sevhisi yakavakwa nevatengesi kune vatengesi. Vatengesi vakaita sesu vanoongorora machati kuti vararame vanoda sevhisi yakavimbika senge Forex Lens kugadzirisa maitiro avo ekuita sarudzo. (Ipfungwa ipi yekutengeserana yekutora, imarii mari yekuisa njodzi, maitiro ekugadzirisa kutengeserana, nguva yekubuda mukutengesa, nezvimwewo)
Mukuru wepamusoro-soro saJeff Bezos anongotarisira kuita sarudzo 3 dzakanaka pazuva. Saka vatengesi vemazuva sesu vangashanda sei padanho repamusoro? Forex Lens ndiyo mhinduro yevatengesi vemazuva emari vakachenjera pasi rose. Forex Lens ichakubatsira iwe kuita sarudzo dzakanakisa dzekutengesa mazuva ese. Isu tinokuitira hwaro uye zvese zvaunofanirwa kuita ndezvekuita.
Joinha Discord Server yedu pano
Iyo Chaiyo Yekutengesa Nharaunda
Ndiwe wawakakomberedza iwe. Joinha nharaunda yevatengesi vanoshanda uye dzidza kubva kune vane ruzivo nyanzvi. Tora hunyanzvi hwako kune rinotevera nhanho nekutevera edu emazuva ese ehupenyu tekinoroji yekuongorora mavhidhiyo.
Mazuva ese Kurarama Hova & Market Analysis
Mavhidhiyo matsva zuva rega rega achikupa iwe chaiyo nguva yekuongorora musika mu Forex, Commodities, Indices uye Crypto misika. Kumbira kuongororwa kwechati chero ipi zvayo uye uwane mhinduro kubva kunyanzvi dzedu.
Inobatsira Kutengesa Pfungwa & Setups
Vaongorori vedu vehunyanzvi vanokupa iwe yakanyanya mukana wekutengesa mazano uchishandisa Smart Mari, uye Supply & Demand nzira dzekutengesa. Izvi zvinokubatsira iwe nekwakarerekera, mapindiro uye kubuda, uye manejimendi enjodzi.
Mutengo chiitiko chinofamba zvakanyanya neChishanu masikati, uye kazhinji…
March 4, 2022/by Forex Lens nhau
Maseta ekutengeserana akakurukurwa muchikamu chemazuva ano che akati wandei…
March 3, 2022/by Forex Lens nhau
Kutora purofiti! Inzira yakanaka yekutanga rimwe zuva rekutengesa.…
March 2, 2022/by Forex Lens nhau
Rarama musika nhaurirano dzekuvandudza mangwanani ano dzakafukidza maitiro emisika…
March 1, 2022/by Forex Lens nhau
Yakakwana yekutengeserana yekupinda yakaongororwa kune akati wandei emari hombe…
February 28, 2022/by Forex Lens nhau
Kuongorora kweBitcoin kwakachinja kubva nezuro. Misika yakaramba…
February 25, 2022/by Forex Lens nhau
Russia inopinda muUkraine, uye isu takafukidza ripple mhedzisiro mu…
February 24, 2022/by Forex Lens nhau
Mikana yekuseta yekutengeserana yakaongororwa panguva yemazuva ano ...
February 23, 2022/by Forex Lens nhau
Altcoin purofiti inoenderera kune yedu pfupi zvinzvimbo nepo BTC uye…
February 22, 2022/by Forex Lens nhau
Price Action yakaongororwa panguva yemangwanani ano New York live…
February 21, 2022/by Forex Lens nhau
Dhora mutengo weavhareji - munhu wese ari kutaura nezvazvo, asi nei…
February 18, 2022/by Forex Lens nhau
Deredza njodzi yekutengesa parizvino, nekuda kwekusagadzikana mumisika.…
February 17, 2022/by Forex Lens nhau
Chii chiri Muchirongwa Chako
Isu tinokudzidzisa iwe kuti ungagone sei
Tora kutengesa kwako kune inotevera nhanho
Dzidza maitiro ekuva mutengesi ane pundutso nhasi
Tora hunyanzvi hwako hwekutengesa kune iyo nhanho nyowani. Tarisa zvedu…
April 2, 2021/ne forexlens
Kana gungwa rakatsetseka harina kumboita mukwasvi ane hunyanzvi, saka musika wakatsetseka…
January 13, 2021/ne forexlens
Kana Kufunga Kukwezva izvo Kwairi Kunotungamirwa, saka tine…
November 3, 2020/ne forexlens
Sezvo mukuru Alan Watts akamboti:
Ichi ndicho chakavanzika chaicho…
October 14, 2020/ne forexlens
”Handikwanise kuyera Forex Lens zvakakwana zvakakwana! Brilliant sevhisi, inogara iripo kana iwe uine chero mibvunzo uye iwe unowana nyanzvi kuraira! Kuongorora kukuru kwemisika! Zvirokwazvo zvine ruzivo rwakanyanya kutevera rubatsiro uye kuraira. Ungakurudzira kune chero munhu anoda kuwana rumwe ruzivo uye ave mutengesi mu forex. ”(2021)
Jay H.Pro Trader Nhengo
”Ndinokutendai Institute Trader. Ndiwe mutengesi akanakisa wandati ndamboona, kwete nekuda kwehunyanzvi hwako chete asi nekuda kwekuzvipira kwako kuvadzidzi vako. ” (2020)
Shirvan S.Pro Trader Nhengo
”Ndakashandisa zviuru zvemadhora zvimwe, pagore rapfuura kutsvaga akanaka forex chiratidzo sevhisi. Zvakanaka kuva nemhando dzakasiyana siyana dzevaviri izvo pamwe ini ndisiri kutarisa yakapihwa nguva, uye zvakanaka nguva dzese kamwechete mukati, pandinenge ndiri pabasa chairo seimwe yemasaini ekutengeserana. Mhando yekusimbisa zvandiri kufunga. "(2017)
Jeff W.Pro Trader Nhengo
" Kuda chiitiko uye kuti zviri pachena sei. Kubatanidzwa kwakanaka kwetarenda uye kugovana ruzivo. Yakanyatsodzorwa. Kufanana nebasa. Ramba wakadaro vakomana! ”(2020)
Kaushal G.Pro Trader Nhengo
” Zvakakodzera pendi rose. Ndakanga ndiri mutsva pakutengesa pandakapinda mukamuri yavo yekutengesa. Ini ndinoshandisa iyo mutengo chiito zano re crypto zvakare uye yakanaka darn inoshanda. Ndinokurudzira zvikuru Forex Lens kune chero munhu achangotanga mukutengesa. Zvinotaridza senge ivo zvakare vane zvakawanda zvemberi zvinhu ikozvino uye yakawanda vatengesi vakanaka pane kusawirirana izvo zvakanaka. Ini ndinoti yakawanda yekubudirira kwangu kwavari! ”(2020)
Doris B.Pro Trader Nhengo
Dzidza maitiro ekutengesa Forex kubva A kusvika Z
Forex Kutengeserana Dzidzo
Mashandisiro aungaita Forex Signals Iyo Yakodzera Nzira
March 18, 2020/naOp Ed
February 21, 2020/ne forexlens
Kutsvaga iyo Broker Yakakodzera yekuita ma trade
February 14, 2020/ne forexlens
Kuwana Kutengesa Mentor
February 10, 2020/ne forexlens
Kuvaka Nheyo Yekutengesa Kwezuva
February 6, 2020/ne forexlens
Ungapinda Sei Mukutengesa Kwezuva
February 3, 2020/naOp Ed
Page 1 pamusoro 212
Unyanzvi Hunyanzvi muHomwe yako
Edza ruzivo rwevashandi vedu vehunyanzvi uye nekukurumidza kudzidza kwako. Isu tinokuratidza maitiro aungaite sosi yakatsiga yemari kuburikidza nekutengesa Forex nemaitiro edu ekutengesa uye manejimendi manejimendi.
Sevha Nguva pane Chati!
Sevha maawa asingaverengeke uchiongorora machati ekuvhima emabasa akanaka setups. Isu tinowana inobatsira mari yekutengesa mazano kuti iwe uongorore. Tora nguva yako kudzoka. Rusununguko rwemari rwakakura, asi nguva rusununguko ndizvo zvese.
Mamwe Maonero Ekutengeserana - uye Zvishoma!
Wana mukana kwete chete 1, asi akawanda tekinoroji anoongorora ane akasiyana nzira dzekutengesa (senge Smart Mari) kuti ikubatsire nekutengesa kwako - uye zvishoma!
Tarisai, Dzidzai & Profit pamwe chete
Yakazara misika yekuongorora kuputsika, mazano ekutengeserana, nezvikamu zve Q & A - mazuva ese! Dzidza maitiro ekudziridza iyo chaiyo Edge mukutengesa nemaitiro atinodzidzisa. Iwe unenge uri wakarairwa zvakanyanya uye wakaringana mutengesi kana iwe wave iwe Pro Prader!
Dzidza munzvimbo isina njodzi
Kutanga kutengesa demo munzvimbo isina njodzi yekutengesa nharaunda iwe uchidzidza. Unogona kukodza hunyanzvi hwako hwekutengesa pasina kunetseka kwekurasikirwa nemari chaiyo. Kutengesa ndiyo hunyanzvi iyo inogona kukubhadhara iwe kwehupenyu hwese.
Akanakisa Vatengi Kutsigira Chikwata
Taura nechikwata chedu chero nguva pa Kurwisana kana email nesu nemibvunzo yako, inofambiswa uye kunetseka pa [email inodzivirirwa]. Isu tinogara tiri pano kuzobatsira nerwendo rwako rwekutengesa.
Gamuchira zvipfupiso zvemazuva ese pane zvatinoona mumusika we Forex
Trade Setups + Hutano Kutengeserana Purofiti
Kutora Profit + Zvakawanda Zvinangwa Zvikuru Zvakasvitswa
Rarama Musika Kuwedzeredza + NZDUSD uye AUDUSD Sell Mamiriro
Yakanyanya Kutengesa Kupinda + BTC & ETH Pfupi Nguva Yekutengesa Matanho
Bitcoin Analysis Update + EURGBP mune Profit
Russia Inopinda muUkraine + USOIL Inosvika Yedu Target Yepamusoro
Trade Setup + Scalping Mikana
Altcoin Profits + Yakanaka Kutengesa Kupinda paAUDUSD
Mutengo Chiito + USOIL Setups Yakagovaniswa
Dollar Mutengo Avhareji: Maitiro Ekutenga Nekutanga uye Chengetedza Zvaunowana
Deredza Kutengeserana Ngozi + BTC uye ETH Strategies
Page 1 pamusoro 52123>»
Page 1 pamusoro 208123>»